သစ္စာအလင်း: Permaculture - 3
ဆရာဘီလျ၊ ဆရာဒေးဗဈ တို့ရဲ့ Permaculture စာအုပျမှာ စှမျးအငျဆိုငျရာအခွခေံနိယမသဘောတရား၁၂ခကျြ ပံ့ပိုးဖွညျ့စှကျပေး တယျ ဆိုတော့ အမရေိကနျလူမြိုးDr. Howard Thomas Odum ကိုလညျးစိတျဝငျစားမိပါတယျ..။ သိပ်ပံပညာကိုလလေ့ာစခေငျြတယျ ၊ အဲဒီပညာတှေ နဲ့ လူနမှေု ဘဝတှေ မွှငျ့တငျပေးနိုငျတဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျ ဖွဈအောငျ သူ့ဖခငျက ငယျငယျလေးကတညျးကအားပေးခဲ့ပါတယျ..။
ဒေါကျတာ ဟိုးဝပျရဲ့ သိပ်ပံသင်ျခနျးစာတှကေ ငှကျတှေ ကို စိတျဝငျစားတဲ့ သူ့အဈကို ထံမှ စတငျသငျယူခဲ့တယျ..။ သူကကြောငျးပွီး တဲ့အခြိနျ အဏ်ဏဝါ သတ်တဗဒေ ပညာရှငျ Robert Coker ထံမှာ အလုပျလုပျတဲ့အခါကတြော့ ငါးတှအေကွောငျး စိတျဝငျစားခဲ့သလို လလေ့ာ သငျယူခဲ့ပါတယျ..။ဇီဝဗဒေ ကိုဝါသနာ ပါသလို လြှပျစဈ စီးကွောငျးတှအေကွောငျးလညျး လလေ့ာခဲ့တယျ..။ အမရေိကနျ မွောကျကယျရိုလိုငျးနားပွညျနယျ တက်ကသိုလျ မှာ ဇီဝဗဒေ ဘာသာ သငျယူလို့ ၃နှဈရှိတော့ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈဖွဈ လို့ လတေပျ မှာ အမှုထမျးခဲ့ရတယျ..။ ပနားမားတူးမွောငျး တဈဝိုကျမှာ တာဝနျကခြဲ့တာမို့အပူပိုငျးဒသေ မိုးလဝေသ ပညာရှငျလညျးဖွဈခဲ့သေးတယျ။ ၁၉ ၄၇ ဒုတိယကမ်ဘာစဈပွီးတော့မှ B.S ( Zoology)ဘှဲ့ ပွီးအောငျဆကျတကျခဲ့ပါတယျ..။သူက ပညာရေးကိုဆကျလကျ ကွိုးစားခဲ့တာ ၁၉ ၅ဝမှာ ပါရဂူ ဘှဲ့တနျးကို ယေးလျ တက်ကသိုလျ မှာတကျခဲ့တယျ..။
သူ့ရဲ့ ဘှဲ့ယူစာတမျးကစိတျဝငျစားစရာပါပဲ..။ The Biogeochemistry of Strontium: With Discussion on the Ecological Integration of Elements
Strontium လို့ချေါတဲ့ သတ်တု တဈမြိုးရဲ့ ဇီဝဓာတုဗဒေ ကို လလေ့ာပွီးဂဟေစနဈ နဲ့ ပေါငျးစညျးနိုငျမှုကိုဆကျစပျရေးသားတဲ့ စာတမျးဖွဈပါတယျ..။
မိုးလဝေသ ဆိုငျရာဝနျထမျးလညျးဖွဈဘူးသလို ငှကျတှအေကွောငျးလညျးစိတျဝငျစားတဲ့ ဒေါကျတာဟိုးဝပျက သတ်တလောက တဈခု လုံး အပွငျ လောကသုံးပါးလုံး ကို ရဲ့ ခွုံငုံတဲ့ဂဟေ စနဈ ကွီးတဈခု အဖွဈ ရှုမွငျသုံးသပျခဲ့တယျ..။
ယေးလျ တက်ကသိုလျ တကျနစေဉျ မှာ ပဲ သူ့ အဈကို နဲ့ အတူ Fundamentals of Ecology စာအုပျကိုရေးသားခဲ့ပွနျပါတယျ..။သူကမွကွေီးထဲက ခဖြေကျြရနျ ခကျခဲတဲ့ သတ်တုတှေ Heavy Metal တှအေကွောငျး ကိုလညျး ရေးသားထုတျဝထေားတာ တှရေ့ပါသေးတယျ..။
သူက ဘာသာရပျနယျ ယျ အသီးသီးကို လလေ့ာ ခဲ့သူပီပီ Permaculture သဘာသာရပျကိုစတငျမိတျဆကျခဲ့တဲ့ ဆရာဘီလျ တို့ ဒေးဗဈတို့ နဲ့တှေ့ တဲ့အခါ ထိုသူတှေ မှာ လိုအပျနတေဲ့ စှမျးအငျ ဆိုငျရာပိုငျး တှေ ဖွညျ့စှကျပေးနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ..။
သူက ၂၀ ရာစုတှငျဖွဈပျေါခဲ့သောရှုပျထှေးပှလေီလှသညျ့ နယျပယျ အသီးသီးက လူ့ဗဟုသုတမြားကိုဆကျလကျထိနျးသိမျးထားပွီးကောငျးစှာအသုံးပွုရနျလို အပျတယျ လို့ ယုံကွညျခဲ့တယျ ။
ဒါဆိုရငျလူသား တှကေ ဂဟေ စနဈကို ပိုမို နားလညျ သဘောပေါကျစတေဲ့ အခွခေံ မူတှခေမြှတျပွီး သငျကွား ပေးနိုငျိ လိမျ့မယျ လို့သူကဆိုခဲ့တယျ..။
ဂဟေအကြိုးပွု စိုကျပြိုးနညျးစနဈ တှကေို လလေ့ာ ဖျေါထုတျ ကငျြ့သုံးကွသူတှကေ Specilaist တှရေဲ့ Single Approach နဲ့ ဖွရှေငျး တဲ့အခါ တိုငျး Multi Approach ဖွရှေငျးတတျကွတဲ့ ဂဟေ ဗဒေ ပညာရှငျ တှေ ရဲ့ ထောငျ့စေ့ အောငျတှေးချေါ ပုံ နှငျ့ လကျတှေ့ ဆနျမှုကို မကြျောလှားနိုငျကွပါဘူး ။
ဒေါကျတာ ဟိုးဝပျအကွောငျး ကိုပွောရငျး Permaculture ကိုလကျတှေ့ အသုံး ခထြားတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံက Wanakaset - Agro-forestry ပညာပေး သငျတနျးကြောငျးလေးသို့ လလေ့ာ ခဲ့တာ လေးကို ထညျ့သှငျးဖျေါပွခငျြပါတယျ..။
Wanakaset ဆိုတာ - Agro-forestry (သီးနှံသဈတောရောနှော စိုကျပြိုးခွငျး) ကို ထိုငျး လို ချေါတာပါ..။
ဘနျကောကျကနေ ကီလို ၂၀၀ နီးပါးဝေးကှာ တဲ့ Kantaburi ဆိုတဲ့ မွို့လေး နားမှာ ရှိပါတယျ..။
ထိုငျးကနေ ကမ်ဘောဒီးယားသှား တဲ့ လမျးမှာပေါ့..။
ဒီ သငျတနျးကြောငျးလေး ရဲ့ ရာဇဝငျက စိတျဝငျစားစရာပါ..။
တညျထောငျ ပညာပေးတဲ့ ဆရာကွီး Vi Boom ကတော့ အခု အသကျ ၈၂နှဈရှိခဲ့ပါပွီ..။
မသခေငျ လောကအတှကျကောငျးကြိုးပွု သှား နိုငျတာ ဝမျးသာစရာပါ..။
လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈ ၅ဝကြျော လောကျက အဲဒီအရပျဒသေ မှာ ရိုငျ ၂၀၀ ( 1Rai = 40meter square=0.395 Acre ) ပိုငျဆိုငျ တဲ့ မွသေူဋ်ဌေး ကွီးပေါ့...။
ရိုငျ ၂၀၀ မှာ ကွံ ၊ ပီလောပီနံ ၊ ဝါ စတာတှေ စိုကျခဲ့တာ....။
ဘဏျက ငှခြေေး အရငျးအနှီး လုပျ..... ပွနျရတာလညျးရှိ.....လိမျ့လိမျ့လညျးလညျး ဖွဈတဲ့ နှဈတှလေညျးရှိ..။
ရာသီဥတု ဆိုးဝါးတဲ့ နှဈမှာ သီးနှံတှေ ဆုံးရှုံးခဲ့တယျ...။
ဘဏျ အတိုးမသှငျး နိုငျတော့ ဒဝေါလီ ခံရတယျ..။ ဘဏျက မွတှေေ သိမျးလိုကျတာ နောကျဆုံး နအေိမျ ပါဝငျ တဲ့ မွကှေကျ ၁၀ ရိုငျ လောကျသာ ကနျြပါတယျ..။
ဆငျးရဲ သှားလိုကျတာ ..... ဘေးဝနျးကငျြ ကလညျး ငှေ ခြေး မဲ့သူမရှိ..။
စားဘို့ အတှကျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဝယျမစားနိုငျ..စိုကျမှ ရတော့မှာပဲ ဆိုပွီး ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စစိုကျပါတယျ...။
ကနျစှနျးရှကျ တှေ စားမကုနျတော့ စညျးပွီး စြေးပို့လိုကျတာ အစညျးကွီး တဈစညျးကို ဘတျ ၃၀ စရခဲ့ပါတယျ..။ တဈပွား မှ မရှိတဲ့ဘဝကနေ ငှေ စတငျ ဝငျလာ တော့ သူကဝမျးသာမိတယျ..။
မိသားစု စားဘို့ အတှကျရညျ ရှယျပွီး ဘူး၊ ဖရုံ ၊သခှား ၊ခရမျး ၊ သရကျ ၊ ကြှဲကော ၊ပိန်နဲ စတာတှေ လို ရငျ....လို သလို စတငျ စိုကျလာပါတယျ..။
တဈနကေ့တြော့.....ခွံနီးနားခငျြး ... ရဲ့ ခွံ ထဲ က သဈပငျကွီး တဈပငျ ဟာ လပွေငျးဒဏျကွောငျ့ သူ့ခွံ ထဲကို လဲ ကြ လာတယျ..။ ခွံနီးခငျြးက ရှငျးပေးပါဆိုလာတော့ သူက ခုတျတယျ ဖွတျတယျ ရှငျးလငျး ပွီး ရောငျးခြ ပေး လိုကျတာ ခုဏ က ကနျစှနျးရှကျရောငျးရငှထေကျ ပိုမြားလာတာ ကို သူတှေ့ ရှိလိုကျတယျ..။
ဖခငျဖွဈသူက တိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီး ဆိုတော့ ဟိုဆေးမွဈလေးရှိလား ။ ဒီဆေးဘကျဝငျ အရှကျလေး မရှိဘူးလား မေးလာတော့ မေးရငျရအောငျဆိုပွီး ထို ၁ဝရိုငျထဲ မှာ အပငျအမြိုးမြိုး စစိုကျဖွဈပါတယျ...။
အဲ ဒီမှာ တငျ Permaculture Wanakaset - Agro-forestry အတှေးအချေါ ကို စပွီး တှေးချေါလာမိတယျ..။
Permaculture Design တဈခု အဖွဈ သူပိုငျ ဆိုငျတဲ့ ၁၀-ရိုငျ ထဲ မှာ အလှာ ရလှာ နဲ့ အပငျ တှေ တညျရှိအောငျ စိတျကူး နဲ့ စိုကျပါတယျ..။
ငှေ မရှိရငျ တဈမြိုး မဟုတျ တဈမြိုး ကတော့ ဝငျငှေ ရနတော ကိုလညျးသူတှလေ့ာပါတယျ..။
ပထ မ အလှာ အနနေဲ့
၁။ အရပျ အမွငျ့ဆုံး အပငျ တှေ ကြှနျးတို့ မဟျောဂနီ ၊ အုနျးသီး ၊ ကှမျးသီး တို့ကို စိုကျပါတယျ..။
၂။ ဒုတိယ အလှာ အနနေဲ့ သဈဂပြိုး ၊ မနျးကညျြး ၊ သရကျ ၊ မငျးဂှတျ ၊ ပိန်နဲ စတဲ့ အလယျ အလတျ အရပျရှိတဲ့အပငျ တှေ စိုကျပါတယျ..။
၃။ တတိယ အလှာ ကတော့ ခွုံပုတျ ပငျတှေ ဖွဈတဲ့ ကငျပှနျးခဉျြ ၊ ဆူးပုတျ ၊ ငရုတျ ၊ ငှကျပြော၊ သင်ျဘော ၊ ခရမျးစတာတှေ စိုကျပါတယျ..။
၄။ စတုတ်ထ အဖွဈ စပါးလငျ လို မွေ ဆီလှာ ထိနျးတဲ့အပငျမြီုး
၅။ မိုးရေ ကို ကနျ နဲ့ သိုလှောငျပွီး ရနေပေငျတှေ ဖွဈတဲ့ ကွာပနျး တို့ ရကေညှတျတို့ ကိုတော့ပဉ်စမအလှာ အဖွဈ စိုကျပါတယျ..။
၆။ ဆဋ်ဌမအလှာ အဖွဈ ဥစား မွအေောကျအစာသိုလှောငျသော ပငျစညျ တှေ ဖွဈတဲ့ ဂငျြး နနှငျး ၊ ဝဥ စတာတှေ စိုကျပါတယျ..။
၇။ သတ်တမ အလှာ ကတော့ နှယျ ပငျတှေ ဆငျတုံးမနှယျ တို့ လို နှယျပငျတှေ ထညျ့ထား ပါတယျ..။
ကံ ဆိုးရာ ကနေ ကံပွနျကောငျး လာခဲ့ပါတယျ..။ ရာသီဥတု ဖောကျပွနျရငျတောငျဆုံး ရှုံးစရာမရှိတာကိုလညျး သူ လကျတှေ့ ဘဝ ကပေးတဲ့ အတှအေ့ကွုံ နဲ့ သဘောပေါကျခဲ့ပါတယျ..။
ခွံ ထဲက ထှကျတဲ့ပစ်စညျးတှေ နဲ့ ကုနျ ပစ်စညျးထုတျနိုငျအောငျ တဆငျ့ ကွိုးစား ပွနျပါတယျ..။
ဥပမာ - အုနျးသီးကနေ ဆီထုတျတာ မြိုး
---------ရှောကျနုသီး ကနေ ခေါငျးလြှျော ရညျ ထုတျတာမြိုး
---------ငရုတျ သီးပဒဲကော တို့ နဲ့ ဟငျးခကျြ ဆီထုတျတာမြိုးတှေ ပါ..။
အဲ လို နဲ့ သူဟာ မဆငျးရဲ တော့ ပဲ ငှေ တှေ ပွနျခမျြးသာလာခဲ့ပါတယျ..။
ရာသီ စိုကျသီးနှံတှေ လို လညျးသူ ပူပနျ နစေရာ မလို တော့တာပါ..။
ခွံဝငျးထဲ မှာ လညျး ခွံကထှကျတဲ့ သဈတှေ နဲ့ သူ အိမျတှေ စဆောကျပါတယျ..။
ကြှနျမ တို့ တှေ့ ခဲ့တာ ဆရာကွီးတို့ နတေဲ့ မိဘ ဘိုးဘှား အိမျ ..က အနှဈ ၁၀၀ ကြျောခဲ့ပါပွီ..။
ဘုရားဝတျပွု တဲ့ အိမျလေး..
သငျတနျးခနျးလေး တှေ စဆောကျပွီး သူစတငျ ပွီး ရှာ နီးခြုပျစပျ ကို ချေါ ပညာ စတငျ သငျကွား ပေး ပါတော့တယျ..။
အဲ လို နဲ့ အဲ ဒီဒသေ မှာ သူ့ သငျတနျးဆငျး တှဟော တဈနိုငျတဈပိုငျ အမယျ စုံသီးနှံတှပေါဝငျတဲ့ တောတှေ တညျထောငျနိုငျလာကွပါတယျ..။
Permaculture Agro-forestry Network ကိုလညျး တညျဆောကျနိုငျ လာပါတယျ..။
Permaculture ဆိုတာ ကလညျး ရာသီဥတု ပွောငျးလဲ မှု ဒဏျ ကို ခံနိုငျငျသော စိုကျပြိုးရေး Climate Smart Agriculture လညျးဖွဈပါတယျ..။
Monoculture ဆိုတာ ရောဂါ ၊ ပိုးမှား ဖိတျချေါ သလို စှဲ မွဲစပွေီး ဆုံးရှုံး မှု လညျး ဖွဈနိုငျခြေ မြား ပါတယျ..။
ဒီလို ပုံ စံ မြိုးလေး စိုကျပြိုးရာကနေ ဒဝေါလီခံရတဲ့ တောငျသူဟာ ပွနျလညျ ခမျြးသာလာသလို အတှေးအချေါ ပါတဲ့ စိုကျပြိုးရေး ကြောငျး ကိုတညျထောငျနိုငျတဲ့ အထိ ဖွဈ ခဲ့တာမို့ ဒီ Permaculture စာအုပျ ကို ရေးသား ခွငျး ဖွဈပါတယျ..။
ဆရာဘီလ်၊ ဆရာဒေးဗစ် တို့ရဲ့ Permaculture စာအုပ်မှာ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခြေခံနိယမသဘောတရား၁၂ချက် ပံ့ပိုးဖြည့်စွက်ပေး တယ် ဆိုတော့ အမေရိကန်လူမျိုးDr. Howard Thomas Odum ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်..။ သိပ္ပံပညာကိုလေ့လာစေချင်တယ် ၊ အဲဒီပညာတွေ နဲ့ လူနေမှု ဘဝတွေ မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်အောင် သူ့ဖခင်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းကအားပေးခဲ့ပါတယ်..။
ဒေါက်တာ ဟိုးဝပ်ရဲ့ သိပ္ပံသင်္ခန်းစာတွေက ငှက်တွေ ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူ့အစ်ကို ထံမှ စတင်သင်ယူခဲ့တယ်..။ သူကကျောင်းပြီး တဲ့အချိန် အဏ္ဏဝါ သတ္တဗေဒ ပညာရှင် Robert Coker ထံမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ငါးတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားခဲ့သလို လေ့လာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်..။ဇီဝဗေဒ ကိုဝါသနာ ပါသလို လျှပ်စစ် စီးကြောင်းတွေအကြောင်းလည်း လေ့လာခဲ့တယ်..။ အမေရိကန် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် တက္ကသိုလ် မှာ ဇီဝဗေဒ ဘာသာ သင်ယူလို့ ၃နှစ်ရှိတော့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ် လို့ လေတပ် မှာ အမှုထမ်းခဲ့ရတယ်..။ ပနားမားတူးမြောင်း တစ်ဝိုက်မှာ တာဝန်ကျခဲ့တာမို့အပူပိုင်းဒေသ မိုးလေဝသ ပညာရှင်လည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ ၁၉ ၄၇ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့မှ B.S ( Zoology)ဘွဲ့ ပြီးအောင်ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်..။သူက ပညာရေးကိုဆက်လက် ကြိုးစားခဲ့တာ ၁၉ ၅၀မှာ ပါရဂူ ဘွဲ့တန်းကို ယေးလ် တက္ကသိုလ် မှာတက်ခဲ့တယ်..။
သူ့ရဲ့ ဘွဲ့ယူစာတမ်းကစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ..။ The Biogeochemistry of Strontium: With Discussion on the Ecological Integration of Elements
Strontium လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တု တစ်မျိုးရဲ့ ဇီဝဓာတုဗေဒ ကို လေ့လာပြီးဂေဟစနစ် နဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင်မှုကိုဆက်စပ်ရေးသားတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်..။
မိုးလေဝသ ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်ဘူးသလို ငှက်တွေအကြောင်းလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဒေါက်တာဟိုးဝပ်က သတ္တလောက တစ်ခု လုံး အပြင် လောကသုံးပါးလုံး ကို ရဲ့ ခြုံငုံတဲ့ဂေဟ စနစ် ကြီးတစ်ခု အဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်..။
ယေးလ် တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ် မှာ ပဲ သူ့ အစ်ကို နဲ့ အတူ Fundamentals of Ecology စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပြန်ပါတယ်..။သူကမြေကြီးထဲက ချေဖျက်ရန် ခက်ခဲတဲ့ သတ္တုတွေ Heavy Metal တွေအကြောင်း ကိုလည်း ရေးသားထုတ်ဝေထားတာ တွေ့ရပါသေးတယ်..။
သူက ဘာသာရပ်နယ် ယ် အသီးသီးကို လေ့လာ ခဲ့သူပီပီ Permaculture သဘာသာရပ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဘီလ် တို့ ဒေးဗစ်တို့ နဲ့တွေ့ တဲ့အခါ ထိုသူတွေ မှာ လိုအပ်နေတဲ့ စွမ်းအင် ဆိုင်ရာပိုင်း တွေ ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
သူက ၂၀ ရာစုတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောရှုပ်ထွေးပွေလီလှသည့် နယ်ပယ် အသီးသီးက လူ့ဗဟုသုတများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းစွာအသုံးပြုရန်လို အပ်တယ် လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ် ။
ဒါဆိုရင်လူသား တွေက ဂေဟ စနစ်ကို ပိုမို နားလည် သဘောပေါက်စေတဲ့ အခြေခံ မူတွေချမှတ်ပြီး သင်ကြား ပေးနိုငိ် လိမ့်မယ် လို့သူကဆိုခဲ့တယ်..။
ဂေဟအကျိုးပြု စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် တွေကို လေ့လာ ဖေါ်ထုတ် ကျင့်သုံးကြသူတွေက Specilaist တွေရဲ့ Single Approach နဲ့ ဖြေရှင်း တဲ့အခါ တိုင်း Multi Approach ဖြေရှင်းတတ်ကြတဲ့ ဂေဟ ဗေဒ ပညာရှင် တွေ ရဲ့ ထောင့်စေ့ အောင်တွေးခေါ် ပုံ နှင့် လက်တွေ့ ဆန်မှုကို မကျော်လွှားနိုင်ကြပါဘူး ။
ဒေါက်တာ ဟိုးဝပ်အကြောင်း ကိုပြောရင်း Permaculture ကိုလက်တွေ့ အသုံး ချထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက Wanakaset - Agro-forestry ပညာပေး သင်တန်းကျောင်းလေးသို့ လေ့လာ ခဲ့တာ လေးကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြချင်ပါတယ်..။
Wanakaset ဆိုတာ - Agro-forestry (သီးနှံသစ်တောရောနှော စိုက်ပျိုးခြင်း) ကို ထိုင်း လို ခေါ်တာပါ..။
ဘန်ကောက်ကနေ ကီလို ၂၀၀ နီးပါးဝေးကွာ တဲ့ Kantaburi ဆိုတဲ့ မြို့လေး နားမှာ ရှိပါတယ်..။
ထိုင်းကနေ ကမ္ဘောဒီးယားသွား တဲ့ လမ်းမှာပေါ့..။
ဒီ သင်တန်းကျောင်းလေး ရဲ့ ရာဇဝင်က စိတ်ဝင်စားစရာပါ..။
တည်ထောင် ပညာပေးတဲ့ ဆရာကြီး Vi Boom ကတော့ အခု အသက် ၈၂နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ..။
မသေခင် လောကအတွက်ကောင်းကျိုးပြု သွား နိုင်တာ ဝမ်းသာစရာပါ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ကျော် လောက်က အဲဒီအရပ်ဒေသ မှာ ရိုင် ၂၀၀ ( 1Rai = 40meter square=0.395 Acre ) ပိုင်ဆိုင် တဲ့ မြေသူဋ္ဌေး ကြီးပေါ့...။
ရိုင် ၂၀၀ မှာ ကြံ ၊ ပီလောပီနံ ၊ ဝါ စတာတွေ စိုက်ခဲ့တာ....။
ဘဏ်က ငွေချေး အရင်းအနှီး လုပ်..... ပြန်ရတာလည်းရှိ.....လိမ့်လိမ့်လည်းလည်း ဖြစ်တဲ့ နှစ်တွေလည်းရှိ..။
ရာသီဥတု ဆိုးဝါးတဲ့ နှစ်မှာ သီးနှံတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်...။
ဘဏ် အတိုးမသွင်း နိုင်တော့ ဒေဝါလီ ခံရတယ်..။ ဘဏ်က မြေတွေ သိမ်းလိုက်တာ နောက်ဆုံး နေအိမ် ပါဝင် တဲ့ မြေကွက် ၁၀ ရိုင် လောက်သာ ကျန်ပါတယ်..။
ဆင်းရဲ သွားလိုက်တာ ..... ဘေးဝန်းကျင် ကလည်း ငွေ ချေး မဲ့သူမရှိ..။
စားဘို့ အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်မစားနိုင်..စိုက်မှ ရတော့မှာပဲ ဆိုပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် စစိုက်ပါတယ်...။
ကန်စွန်းရွက် တွေ စားမကုန်တော့ စည်းပြီး ဈေးပို့လိုက်တာ အစည်းကြီး တစ်စည်းကို ဘတ် ၃၀ စရခဲ့ပါတယ်..။ တစ်ပြား မှ မရှိတဲ့ဘဝကနေ ငွေ စတင် ဝင်လာ တော့ သူကဝမ်းသာမိတယ်..။
မိသားစု စားဘို့ အတွက်ရည် ရွယ်ပြီး ဘူး၊ ဖရုံ ၊သခွား ၊ခရမ်း ၊ သရက် ၊ ကျွဲကော ၊ပိန္နဲ စတာတွေ လို ရင်....လို သလို စတင် စိုက်လာပါတယ်..။
တစ်နေ့ကျတော့.....ခြံနီးနားချင်း ... ရဲ့ ခြံ ထဲ က သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင် ဟာ လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် သူ့ခြံ ထဲကို လဲ ကျ လာတယ်..။ ခြံနီးချင်းက ရှင်းပေးပါဆိုလာတော့ သူက ခုတ်တယ် ဖြတ်တယ် ရှင်းလင်း ပြီး ရောင်းချ ပေး လိုက်တာ ခုဏ က ကန်စွန်းရွက်ရောင်းရငွေထက် ပိုများလာတာ ကို သူတွေ့ ရှိလိုက်တယ်..။
ဖခင်ဖြစ်သူက တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဆိုတော့ ဟိုဆေးမြစ်လေးရှိလား ။ ဒီဆေးဘက်ဝင် အရွက်လေး မရှိဘူးလား မေးလာတော့ မေးရင်ရအောင်ဆိုပြီး ထို ၁၀ရိုင်ထဲ မှာ အပင်အမျိုးမျိုး စစိုက်ဖြစ်ပါတယ်...။
အဲ ဒီမှာ တင် Permaculture Wanakaset - Agro-forestry အတွေးအခေါ် ကို စပြီး တွေးခေါ်လာမိတယ်..။
Permaculture Design တစ်ခု အဖြစ် သူပိုင် ဆိုင်တဲ့ ၁၀-ရိုင် ထဲ မှာ အလွှာ ၇လွှာ နဲ့ အပင် တွေ တည်ရှိအောင် စိတ်ကူး နဲ့ စိုက်ပါတယ်..။
ငွေ မရှိရင် တစ်မျိုး မဟုတ် တစ်မျိုး ကတော့ ဝင်ငွေ ရနေတာ ကိုလည်းသူတွေ့လာပါတယ်..။
ပထ မ အလွှာ အနေနဲ့
၁။ အရပ် အမြင့်ဆုံး အပင် တွေ ကျွန်းတို့ မဟော်ဂနီ ၊ အုန်းသီး ၊ ကွမ်းသီး တို့ကို စိုက်ပါတယ်..။
၂။ ဒုတိယ အလွှာ အနေနဲ့ သစ်ဂျပိုး ၊ မန်းကျည်း ၊ သရက် ၊ မင်းဂွတ် ၊ ပိန္နဲ စတဲ့ အလယ် အလတ် အရပ်ရှိတဲ့အပင် တွေ စိုက်ပါတယ်..။
၃။ တတိယ အလွှာ ကတော့ ခြုံပုတ် ပင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကင်ပွန်းချဉ် ၊ ဆူးပုတ် ၊ ငရုတ် ၊ ငှက်ပျော၊ သင်္ဘော ၊ ခရမ်းစတာတွေ စိုက်ပါတယ်..။
၄။ စတုတ္ထ အဖြစ် စပါးလင် လို မြေ ဆီလွှာ ထိန်းတဲ့အပင်မျီုး
၅။ မိုးရေ ကို ကန် နဲ့ သိုလှောင်ပြီး ရေနေပင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကြာပန်း တို့ ရေကညွတ်တို့ ကိုတော့ပဉ္စမအလွှာ အဖြစ် စိုက်ပါတယ်..။
၆။ ဆဋ္ဌမအလွှာ အဖြစ် ဥစား မြေအောက်အစာသိုလှောင်သော ပင်စည် တွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျင်း နနွင်း ၊ ဝဥ စတာတွေ စိုက်ပါတယ်..။
၇။ သတ္တမ အလွှာ ကတော့ နွယ် ပင်တွေ ဆင်တုံးမနွယ် တို့ လို နွယ်ပင်တွေ ထည့်ထား ပါတယ်..။
ကံ ဆိုးရာ ကနေ ကံပြန်ကောင်း လာခဲ့ပါတယ်..။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ရင်တောင်ဆုံး ရှုံးစရာမရှိတာကိုလည်း သူ လက်တွေ့ ဘဝ ကပေးတဲ့ အတွေ့အကြုံ နဲ့ သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်..။
ခြံ ထဲက ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ကုန် ပစ္စည်းထုတ်နိုင်အောင် တဆင့် ကြိုးစား ပြန်ပါတယ်..။
ဥပမာ - အုန်းသီးကနေ ဆီထုတ်တာ မျိုး
---------ရှောက်နုသီး ကနေ ခေါင်းလျှော် ရည် ထုတ်တာမျိုး
---------ငရုတ် သီးပဒဲကော တို့ နဲ့ ဟင်းချက် ဆီထုတ်တာမျိုးတွေ ပါ..။
အဲ လို နဲ့ သူဟာ မဆင်းရဲ တော့ ပဲ ငွေ တွေ ပြန်ချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်..။
ရာသီ စိုက်သီးနှံတွေ လို လည်းသူ ပူပန် နေစရာ မလို တော့တာပါ..။
ခြံဝင်းထဲ မှာ လည်း ခြံကထွက်တဲ့ သစ်တွေ နဲ့ သူ အိမ်တွေ စဆောက်ပါတယ်..။
ကျွန်မ တို့ တွေ့ ခဲ့တာ ဆရာကြီးတို့ နေတဲ့ မိဘ ဘိုးဘွား အိမ် ..က အနှစ် ၁၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ..။
ဘုရားဝတ်ပြု တဲ့ အိမ်လေး..
သင်တန်းခန်းလေး တွေ စဆောက်ပြီး သူစတင် ပြီး ရွာ နီးချုပ်စပ် ကို ခေါ် ပညာ စတင် သင်ကြား ပေး ပါတော့တယ်..။
အဲ လို နဲ့ အဲ ဒီဒေသ မှာ သူ့ သင်တန်းဆင်း တွေဟာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အမယ် စုံသီးနှံတွေပါဝင်တဲ့ တောတွေ တည်ထောင်နိုင်လာကြပါတယ်..။
Permaculture Agro-forestry Network ကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင် လာပါတယ်..။
Permaculture ဆိုတာ ကလည်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲ မှု ဒဏ် ကို ခံနိုင်င်သော စိုက်ပျိုးရေး Climate Smart Agriculture လည်းဖြစ်ပါတယ်..။
Monoculture ဆိုတာ ရောဂါ ၊ ပိုးမွှား ဖိတ်ခေါ် သလို စွဲ မြဲစေပြီး ဆုံးရှုံး မှု လည်း ဖြစ်နိုင်ချေ များ ပါတယ်..။
ဒီလို ပုံ စံ မျိုးလေး စိုက်ပျိုးရာကနေ ဒေဝါလီခံရတဲ့ တောင်သူဟာ ပြန်လည် ချမ်းသာလာသလို အတွေးအခေါ် ပါတဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ကျောင်း ကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့ အထိ ဖြစ် ခဲ့တာမို့ ဒီ Permaculture စာအုပ် ကို ရေးသား ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:44 AM